पोस्ट समय: जुलाई 13-2021
A: छाती 1. लेटाउने प्रेस: ​​मुख्य रूप pectoralis प्रमुख मांसपेशी र छाती नाली को मोटाई अभ्यास। कार्य: दुबै हात मा dumbbells संग तपाइँको बेन्च मा लेट, तपाइँको काँध मा dumbbells संग, हत्केलाहरु को सामना गरीरहेको छ, dumbbells माथि धक्का जब सम्म तपाइँको हतियार सीधा छैन, रोक्नुहोस्, र बिस्तारै po मा फर्कनुहोस्।थप पढ्नुहोस् »
यी4"अप्रभावी स्वास्थ्य" व्यायाम बाट बच्नुहोस्
सायद एक स्वस्थ जीवनशैली को लागी, वा मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउन को लागी हो, धेरै मानिसहरु फिटनेस संग प्रेममा पर्छन्, नतिजा को रूप मा, केहि विद्यार्थीहरु प्रत्येक ठूलो कस्टम APP, ट्यूटोरियल किताबहरु एक गिरावट छैन, खेल्न थाले। पूर्ण सैद्धांतिक कौशल, तर भन्न को लागी, अभ्यास एकमात्र मापदण्ड हो ...थप पढ्नुहोस् »
सुरक्षा तपाइँको पहिलो विचार को एक सुरक्षा हुनेछ। के तपाइँ घर मा उपकरणहरु को लागी सुरक्षित छ? तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? तपाइँका बच्चाहरु छन्? यदि तपाइँ स्वास्थ्य समस्याहरु को लागी हुन्छ, तपाइँको डाक्टर संग जाँच गर्नुहोस् र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि एक नयाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू गर्ने तपाइँको लागी सुरक्षित छ। केहि उपकरणहरु सु ...थप पढ्नुहोस् »